ကလေးကို အသက်အရွယ်အလိုက် လိင်ကျန်းမာရေး ပညာပေးရအောင် . . . – Healthy Life Journal
ကလေးကို အသက်အရွယ်အလိုက် လိင်ကျန်းမာရေး ပညာပေးရအောင် . . .
Posted on နိုဝငျဘာ 3, 2018
သင့်ကလေးကို လိင်ကျန်းမာရေးအကြောင်း ပညာပေးတော့မယ်ဆိုရင် အသက်အရွယ်အလိုက် သင့်တော်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို ပေးရပါမယ်။ ငယ်ရွယ်တဲ့ ကလေးတွေက လိင်ကိစ္စ (Sex) ထက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရတာ၊ ကလေးမွေးရတာ စတာတွေကို ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားတတ်ပါတယ်။ ကလေးတွေက တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး မတူညီတဲ့အတွက် ကလေးတွေကို အသက်အရွယ်အလိုက် လိင်ကိစ္စနဲ့ မျိုးဆက်ပွား မှုအကြောင်း သိနားလည်အောင် ပညာပေးသင့်ပါတယ်။
– မွေးစမှ အသက် နှစ်နှစ်အရွယ်အထိ
လမ်းလျှောက်တတ်စ တွားသွားအရွယ်ကလေးငယ်တွေကို မျိုးပွားလိင်အင်္ဂါ အပါအ၀င် ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကို ဘယ်လိုခေါ်ဆိုတယ်ဆိုတာ ပြောပြသင့်ပါတယ်။ အသက် နှစ်နှစ်အရွယ်က လေးအများစုက ယောက်ျားလေးနဲ့ မိန်းကလေးအကြား ခြားနားချက်ကို သိထားပြီး လူတစ်ယောက်က ယောက်ျားလား၊ မိန်းမလားဆိုတာ ခွဲခြားနိုင်နေပါပြီ။
– အသက်နှစ်နှစ်မှ ငါးနှစ်အရွယ်အထိ
ကလေးတွေက မျိုးဆက်ပွားတာရဲ့အလွန်အခြေခံကျတဲ့အချက်ကို သိနားလည်သင့်ပါတယ်။ ဥပမာပြောရရင် အမျိုးသားတစ်ဦးနဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးတို့ပေါင်းစပ်ပြီး ကလေးဖြစ်လာတယ်ဆိုတာမျိုး၊ ကလေးလေးက အမျိုးသမီးရဲ့ သားအိမ်ထဲမှာ ကြီးထွားလာတယ်ဆိုတာမျိုး ပြောပြသင့်ပါတယ်။ ကလေးတွေက သူတို့ခန္ဓာကိုယ်က သူတို့ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တယ် ဆိုတာနားလည်သင့်ပြီး သူတို့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဘယ်သူမှ (ဘယ်သူစိမ်းမှ) လာရောက် ထိပါးခွင့်မရှိဘူး ဆိုတာမျိုး သင်ပေးထားသင့်ပါတယ်။
– အသက် ငါးနှစ်မှ ရှစ်နှစ်အရွယ်အထိ
အသက် ငါးနှစ်- ရှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးတွေကို တချို့လူတွေက လိင်တူချစ်ခင်တာ၊ လိင်ကွဲ ချစ်ခင်တာနဲ့ လိင်တူလိင်ကွဲ ချစ်ခင်တာစတဲ့ မတူညီတဲ့သ ဘောတရားတွေရှိတယ်ဆိုတာ ရှင်းပြသင့်ပါတယ်။ အသက် ၁၀ နှစ်မတိုင်ခင် အပျိုဖော်၊ လူပျိုဖော်ဝင်တဲ့ အတွေ့အကြုံတချို့ကို ကြုံတွေရနိုင်တဲ့အတွက် အပျိုဖော်၊ လူပျိုဖော်ဝင်တဲ့အခါ ပြောင်းလဲတတ်တဲ့ အခြေခံသဘောတရားတွေကိုသင်ပေးထားသင့်ပါတယ်။
– အသက် ကိုးနှစ်မှ ၁၂ နှစ်အရွယ်အထိ
ဒီအရွယ်မှာ လိင်ဆက်ဆံမှုအကြောင်း နားလည်သဘောပေါက်ပြီး အန္တရာယ်ကင်းတဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှု၊ ပဋိသန္ဓေတားတာ စတာတွေအကြောင်းကို သင်ပေးလို့ရပါပြီ။ ဘယ်အရာတွေက အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးဖြစ်စေပြီး ဘယ်အရာတွေက မကောင်းတဲ့ ဆက်ဆံရေး ဖြစ်စေတယ်ဆိုတာနားလည်ဖို့ သေချာသင်ကြားပေးပါ။ မီဒီယာတွေမှာ ဖော်ပြလာတဲ့ လိင်ကိစ္စအကြောင်း အမှန်၊ အမှားကို ခွဲခြားနိုင်စွမ်းရှိလာတဲ့အထိ သင့်ကလေးကို သင်ပေးသင့်ပါတယ်။
– အသက် ၁၃ နှစ်မှ ၁၈ နှစ်အရွယ်အထိ
ဆယ်ကျော်သက်တွေအရွယ်တွေက ယေဘုယျအားဖြင့် အလွန်သီးသန့်နေလိုပြီး လွတ်လပ်မှုကို ခုံမင်တဲ့အရွယ်ပါ။ ဒီအရွယ်မှာ လိင်ကိစ္စအကြောင်း နားလည်သဘောပေါက်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တန်ဖိုးထားတတ်အောင် စိတ်နှလုံးသားထဲသွင်းပေးဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါမှသာ ဘေးကင်းလုံခြုံစွာကြီးပြင်းလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Related Items:kid, sex education